Ukuhlaseleka kwamathumbu | Health Content
Kuvame ukuchazwa njegobuhlungu besisu nokungahambi kahle ngokushintsha kohlelo lwamathumbu, uma kungekho enye incazelo yezokwelopha yezinpawu.
Izinga eliphakeme selibonakele kwabancane iningi labantu elingaphansi kweminyaka engamashumi amahlanu (50 years)
Kubonakale kakhulu kubantu besifane ukwedlula kwabesilisa.
Ukwelashwa kwe-estrogen ngaphambilini noma ngemuva kwesigaba sokunqamuka kokuya esikhathini kwabantu besifazane kwandisa ubungozi
Ukuba nomlando emdenini. Lokho wukuthi ilunga lomdeni elisezingeni lokuqala besifo bokuhlaseleka kwamathumbu (IBS) singandisa ukuba sengonzini
I-IBS kubonqkale kuhlotshaniswa nokukhathazela noma ukuhlukunyezwa ngokomoya noma ngokocansi ezinye izifo zengqondo
Kubonakele lakho kumlando wezomzimba, ukuhlukunyezwa ngokomoya noma ngokacansi, kungandisa ubungozi.
Izimbangela eziqondile ze- IBS azaziwa kuphakanyisiwe ukuthi kuhlobene nobunzima ngokugaya nokugaya nokuzwela okwengeziwe kwesithumbu, izici ezilandelayo ,noma kunjalo, zibonwe zidlala indima:
Ukuhlangana kwemisipho ezindogeni zamathumbu okuhlala isikhati eside futhi kunamandla kunokunjwayelekile kungadala igesi, ukuqhuma kanye nohudo. Iziphazamiso ezibuthakathaka zingenza ukuthi ukumba kokudla kuthambe kancane okuzoholela kumandle anzima nawomile.
Ukungahambeki kahle kwizinzwa okuhlinzeka umgudu wakho wokugaya ukudla kungadala ukungaphatheki kahle lapho isisu sakho sisuka kugesi noma emandleni
Ukuphendula kohlelo lokuvikela umzimba okubangela ukuvuvukala okuhambisana nobuhlungu nohudo.
I-Bacteria yanda ngokweqile noma ukukhula kwe-IBS ngemuva kokutheleleka ngegciwane (isibonelo, igastroenteritis)
NOTE: I-gastroenteritis ukuvuvukala kwamathumbu okubangelwe ukutheleleka okutheleleke ngegciwane noma amagciwane ovame ukubangela uhudo ngokwenqile kanye noma ukuhlanza. Kaningi ukubona ezinganeni.
Uthumbu lunama- bacterium abonakala ngokuthi “amahle”. Kuthiwa nabantu abane IBS banezinguquko ngonhlobo lwamagciwane.
Umuthi ongumoya wokulalisa umuntu angezwa izinhlungu/ ukusonga kwesisu
Izinkinga zezemphilo ezivela kwisifo sokuhlaseleka kwamathumbu (IBS) zifaka phakathi imizoko (Haemorrhoids) (ekhuphuka ngohudo kanye/ noma ukuqunjelwa), ukudangala, ukuncipha kwesisindo ,ukuswelelakwama vitamini kanye nama minerali nezinkinga ze-pschosocial njengoku phazenyiswa komsebenzi, ubudlelwane kubangane kanye nomdeni.
INDLELA YOSHITSHO YOKUPHILA NGESIFO SE-IBS
Ukudla ukudla okunempilo kuba lulekile ekwelapheni isifo se-IBS onaso. Lokhu kuzonciphisa ukungakhululeki nobuhlungu obhekene nabo.
Ukuzivocavoca njalo kugasiza uhlelo lwakho lokugaya ukudla, ukunciphisa izimpawu ze-IBS futhi kuthuthukise nemizwelo ejwayelekile.
Gwema ukucindezeleka ngoba kungenza izimpawu zakho zibe zimbi kakhulu. Thola izindlela zokunciphisa ukucabanga okufana namasu wokuphumela, ukuzivacavoca okujile, iyoga, ukuzindla njll.
Ukuba namaqembu okusekela kungakusiza ukuthi uthole izindlela ezahlukahlukene zokwelapha izimpawu zakho njengoba kuzobandakanya ukwaba izinkathi, ukwelapha kanye namava.
Ukwelashwa okufana nokwelapha okuphathelene nokuziphatha kungasiza ukuthuthukisa amakhono okubhekana nako futhi uthuthukise izinga yempilo yonke
Gwema utshwala nokubhema ngoba kuzokhulisa izimpawu zako.
Buza udaleootela wakho mayelana nezengezo (Probiotic supplement)
Lokhu ukuphazamisaeka okungathandeki okubonakala ngokushintsha okumangalisayo kokunyakaza kwamathumbu njengokuhudula noma ukuqunjelwa imisebenzi yensuku zonke ingahle ibekezeleke ngenxa yokuqunjelwa kanye nobuhlungu besisu.Izeluleko zokudla zingasiza ekuthuthukiseni izimpawu zakho, kepha ukungenelela kwezokwelapha kubalulekile ekwelashweni.
Ukudla okuphezulu kwefayibhu kusiza ekwakheni inqwaba yezinhle zakho ezizosiza ekuhambiseni amathumbu.Lokhu kufaka izithelo,imifino kanye nokusanhlavu okuphelele.Kancane kancane engenza ifayibhu ekudleni kwakho,qala kancane,ukhuphule kancane uze ufike endaweni yokungabekezeleka kokuyidla.
Uma uzwa ukuqhuma kanye nohudo ngenxa yefayibha ephezulu,esikhundleni sokuyiyeka ifayibhu ngokuphelele ekudleni kwakho,gxila kufayibhu encibilikayo.Lokhu kufaka phakathi ama-apula,amajikijolo,iziqathi,i- oatmeal,ubhontshisi,njll.
Gwema ifayibhu engabonakali ukuthi itholakala kumantongomane,utamatis,u-bronccoli,i-klabishi,njll.
Gwema izivamile ezifana nekhofi noshokoledi.
Zama ukufaka ekudleni uhlobo elungenalo imikhiqizo kwe-gluten ukubona ukuthi ngabe izimpawu zakho ziyathuthuka lokhu kuzobandakanya irye kanye nanoma uluphi uhlobo lukakolweni.
Gwema ukudla okunamafutha amaningi njengokudla okuthosiwe kanye namafutha ezilwane.Gxila kakhulu enyameni enganamafutha,inhlanzi nenkukhu.
Pheka ukudla ngendlela yoku-griller,broiling noma ukubila kungabi nama futha.Isifutho sokupheka singamiswa esikhundleni samafutha okupheka.
Gwema ama-Carbohydrates anzima ukuthi amathumbu angakwazi ukugaya okufana ne-lactose etholakala emikhiqizweni yobisi, amapeyini,amakhabe ,amapharele,imango,amaplamu,ama-nectorines,amalegumes,imikhiqizo ephakeme yefructose,ukolweni,irye,i-bronccholi,ama-brussels amahlumeva,ukholifulawa,amakhowe,i-artichoke,njll.
Buza udokotela wakho ngokudla kweFOODMAPs,okuyisichazi sama-oligosacharrides avuthiwe,amandisaccharides namapolyls.
Uma udla ngaphaphandla,zama ukukhetha ukudla okusondelana nalokho okudla ekhaya.